Ahoana ny fomba hiverenana rohy mankany amin'ny tranokalako?
Backlinks dia toy ny famenon'ny tranonkala fanatsarana ary milalao ny anjara asa fototra amin'ny lalao fanatsarana ny fikarohana. Izany no mahatonga ny manam-pahaizana SEO hampiditra vola amin'ny fananganana rohy sasany raha toa ka manaraka ny toro-lalana Google izy ireo na tsia. Ny fomba fampielezana ny rohy dia mampiditra lahatsoratra, hafatra iombonana, lahatsoratra bilaogy, fanentanana fanentanana ary rohy karama.
Ireo teknolojia fanorenana rohy dia mety hampiditra ny ezaka SEO anao na handratra azy ireo mihitsy. Ny ankamaroan'ny tompon'ny tranonkala dia mitondra ny teny hoe "fanomezana anjara SEO" ho fampivoarana ny tranokalan'ny tranonkala. Na izany aza, ny marina mampalahelo dia ny hoe na dia manamboatra rohy malaza aza ianao, dia tsy misy antoka fa ho hitanao ny toerana ambony.
Ao amin'ity lahatsoratra ity, dia hahita antony vitsivitsy mety tsy ahitanao mivantana mivantana ny toerana misy anao eo amin'ny valin'ny fikarohana ianao.
Nahoana no tsy miteraka foana ny famerenana ny rohy mankany amin'ny tranokalanao?
Raha toa ianao ka mahazo rohy ivelany mankany amin'ny tranonkalanao amin'ny fomba mahatsikaiky spammy, dia tsy hanao soa be dia be ianao. Ny lohamilina madinidinika marobe avy amin'ny tranokala hafa dia tsy hanome anao ny fanosehana an'i SERP. Tsy ny tranokalanao ihany no hizaka ny vokatra TOP ao amin'ny Google, fa mety hampidi-bola ihany koa ianao.
Amin'izao androntsika izao, ny mpitsidika dia mahatsapa ny loza ateraky ny rohy spammy toy ny rohy ivelany avy amin'ny toeram-pambolena, ny spammy blog, ny dokam-barotra ary ny lahatsoratra. Na izany aza, ireo tompon-tranonkala sasany, indrindra ireo izay vaovao ao amin'ity sehatra ity, dia mety hianjera amin'ny fomba mora ahazoana ranom-pifandraisana betsaka amin'ny loharanom-baovao ao anatin'ny fotoana fohy. Manoro hevitra mafy aho mba hisorohana ny teknolojia fanorenana an-tsokosoko toy ny Google dia lasa mahay mandanjalanja ary afaka mahita haingana ireo mpandika lalàna rehetra ary mamely azy ireo. Tsy ho fantatrao velively hoe ahoana no fomba handikan'i Google an'io rakitra io. Indraindray ny fikarohana fotsifotsy dia tsy miraharaha afa-tsy rohy avy amin'ny tranonkala spammy ary tsy manisy fifamoivoizana avy amin'izy ireo.
Mba hahazoana valiny hita avy amin'ny fanentanana fananganana rohy, dia mila mahazo antoka ianao fa hanangana rohy avy amin'ny tranonkala izay - manam-pahaizana, manan-danja eo amin'ny tsenanao, mendri-pitokisana, mandanjalanja ary mifandray amin'ny hafa, toerana azo antoka sy azo ekena.
Ny finoana iraisana iray hafa amin'ity sehatra ity dia ny famerenana lohamilina avy amin'ny iray amin'ireo loharanom-baovao TOP Internet toy ny Entrepreneur, Forbes na New York Times dia afaka manosika haingana ny tranokalan'ny SERP. Tsy miasa toy izany foana izy io. Ity rohy ity dia afaka manampy ny tranokalanao ho ambony kokoa ary hitondra anao ny fifamoivoizana niverimberina na tsy misy fiantraikany amin'ny mombamomba anao.
Izay tsy azontsika velabelarina dia ny rohy dia tsara na ratsy ho an'ny fijerena fikarohana satria i Google dia afaka mandika mora kokoa io rohy io fa tsy rantsana 100%.
Io toe-javatra io ihany no azo jerena miaraka amin'ny fanamarihana bilaogy. Amin'ny tranga sasany dia mitondra sanda sarobidy ho an'ny tranonkalanao ireo rohy ireo, fa indraindray izy ireo dia lazaina ho tsikombakomba spammy momba ny raharaham-barotra. Ny valin-kevitry ny blaoginao dia mety hamoaka valiny samihafa amin'ny tranokalanao Source .